သမ္မတရဲ့ဘာလီအင်တာဗျူးကိုသုံးသပ်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၁+၂+၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » သမ္မတရဲ့ဘာလီအင်တာဗျူးကိုသုံးသပ်ကြည့်ခြင်း အပိုင်း(၁+၂+၃)
Posted by aungpanese on Nov 30, 2011 in Politics, Issues |3comments
မှာ အများကြီးရှိတယ်။ “ ( သမ္မတသိန်းစိန်ဘာလီအင်တာဗျူးအဖြေ)
မတရားမှု၊မမျှတမှု၊တန်းတူညီမျှမရှိမှုတို့အတွက်အသက်သေသေ၊အရိုးကြေကြေ၊အရေခမ်းခမ်း၊ အမှန်တရားအတွက်အောင်ပွဲမရမခြင်းမိမိ၏ရပ်တည်ချက်(Stance) ကိုလက်နက်၊ငွေ၊အာဏာ၊အစရှိတဲ့ခြောက်လုံး၊မြှောက်လုံးတွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံရေး လောကဓံတွေကြောင့်ပြိုလဲမသွား
(၂) ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ( by –election) အပေါ်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စိတ်ဝင်းစားမှုရှိမှုအပေါ်သုံးသပ်ချက်(၂)
“ လုပ်ပေးရမှာပေါ့ တို့ ရှိနေသေးတော့…လို့ဆိုတဲ့ပြည်သူကိုလေးစားတဲ့လေသံမျိုးမရှိပါဘူး။
ကျွတ်မှာမဟုတ်လို့တဲ့။ဒေါ်စုလည်း နှစ်ပေါင်း ၆၀ လောက်တရား ဥပဒေမဲ့ ထင်ရာစိုင်းလာခဲ့တဲ့ အသွင်သဏ္ဍာန် ပြောင်း အနှစ်သာရမပြောင်းတဲ့
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို လွတ်တော် အထဲ ရောက်မှ ပြင်လို့ မရနိုင်လို့ depression ၀င်သွားပြီး ညောင်နှစ်ပင်က ပြန်လှည့်လာသလို
အဖြစ်မျိုး ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်မိတယ်။ ရှင်တို့ စစ်သားတွေ ဂတိမတည်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တာလည်း ဒေါ် စုပါပဲ။ ကျနော် တို့ အနေ နဲ့ တော့
Haveagood trip . လို့ ပဲ…………………………….
ဘယ်အချိန်မှာဖြစ် မယ်၊ဘယ်အချိန်တော့မဖြစ်ရဘူး။ ဆိုတာလည်းသတ်မှတ်ပေးလို့မရနိုင်ပါဘူး၊
စကြ၀ဠာရဲ့ပေါက်ကွဲမှုအစတောင်မှ ( Big bang) အမှတ်စက်ကလေးတစ်ခုမှစခဲ့တာပါ။ဘာဘဲပြောပြော၊ဘယ်လိုဘဲလုပ်လုပ်၊
(၃) ဒေါ်စုအပေါ်ဦးသိန်စိန်နဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါများရဲ့သဘောထားအပေါ် သုံးသပ်ချက်(၃)
ဆိုတော့ ဘေးဖယ်ထားခဲ့မဲ့မတူတာတွေက (Major)အဓိကဟာတွေဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေ၊တိုင်းရင်းသားတွေလိုချင်တဲ့၊
လူတစ်စုစိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့၂၀၀၈နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ NLD မှအသိအမှတ်ပြုထောက်ခံ
(သို့) Money politic နိုင်ငံရေးကိုပုံစံပြုကျင့်သုံးမှာဖြစ်ကြောင်း………
(၁) နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ကို လွှတ်မပေး တဲ့အပြင် သမ္မတ ပါးစပ် ကတောင် ဗျောင် စလိမ်ပြီ
(၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ်ဆိုခါမှ (၃)လ လိုလို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်ပြီ
(၃) မစ္စစ် ကလင်တန် ကို လေဆိပ်မှာ ကြိုတာ ဒု ၀န်ကြီး အဆင့်ပဲ ဖြစ်နေသလို MRTV သီတင်းမှာ ခေါင်းကြီး သီတင်း အနေနဲ့ မတင်ဘူး….
ကောင်းမလိုလိုနဲ့ စဖေါက်ပြီလို့ မြင်ပါတယ်…..
ပြည်သူပြည်သားတွေကတော့ ဒုက္ခတွေ ဆက်ခံရအုံးတော့မယ် ထင်ပါ့…..
ကောင်ပြီ ကောင်းလျှက် ရှိနေပြီးမှ စာတွေဖတ်နေတယ် ဆိုတဲ့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးက ခေါ်သတိ ပေးလိုက် လို့ပေလား….
သို့တည်းမဟုတ် ဂုဏ်းချုပ်ကြီး စိတ်တော် အမျှက် ရှနေသည်ဟု ထင်မြင် ကြောက်ရွံ့ နေမိ၍ ပေလား….
မလုပ်ကြပါနဲ့တော့……. မြန်မာတွေ ကမ္ဘာမှာ ခေါင်းတောင် မဖေါ်နိုင်အောင် ပါပဲ…..
တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို နည်းနည်းတော့ ချစ်ကြပါအုံး…. ညှာတာကြပါအုံး……
အောက်မှာ.. အီလင်ဗန်င်းမီဒီယာသတင်းကို ရှိနေတဲ့ကောမန့်တွေပါ ပူးတင်ပေးလိုက်တယ်..။
တင်ထားတဲ့.. ဝေဖန်ချက်အတွက် ..အချက်အလက်ဖြည့်ပေးတာဖြစ်ပါကြောင်း..။
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် အကျဉ်းသားများ ရှိနေပါက ၎င်းတို့ကို ဆူပူမှု၊ အုံကြွမှုအတွက်မပါဘဲ နိုင်ငံရေးကြောင့်ဆိုပါက အထူးကိစ္စ တစ်ရပ်အနေဖြင့် စဉ်းစားပေးနိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ပြောကြား
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသည့် အကျဉ်းသားများရှိနေပါက ၎င်းတို့ကို ဆူပူမှု၊ အုံကြွမှု အတွက်မပါဘဲ နိုင်ငံရေးကြောင့်ဆိုပါက အထူးကိစ္စတစ်ရပ် အနေဖြင့် စဉ်းစားပေးနိုင်ကြောင်း ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက နိုဝင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် မီဒီယာတွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် မီဒီယာတစ်ခုက “ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့သူတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူတို့ တွေကိုရော ဘယ်ကာလမှာ အကြွင်းမဲ့ လွှတ်ပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလဲ”ဟု မေးမြန်းချက်ကို ယင်းကဲ့သို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက “ဒီနေရာမှာ ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ပေါ့လေ။ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဆိုတာ အစိုးရဘက်နဲ့ တောင်းဆိုတဲ့ဘက် ပေါ့လေ။ ဒီလိုစကားရပ်အပေါ်မှာ အငြင်းပွားတာတော့ ရှိကောင်းရှိမယ်။ မိမိအနေနဲ့တော့ ဒီလိုအငြင်းပွားတဲ့ စကားရပ်ကိုမသုံးဘဲနဲ့ ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံရတဲ့ အကျဉ်းသားများ(သို့မဟုတ်) နိုင်ငံရေးကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ အကျဉ်းသား တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း အများနည်းတူ စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ သူတို့တွေ အတွက်တော့ ခုနကအမှန်တကယ်ပဲ ဒီဆူပူမှု၊ အုံကြွမှုအတွက် မပါဘဲ နိုင်ငံရေးကြောင့် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ အထူးကိစ္စ တစ်ရပ်အနေနဲ့ စဉ်းစားနိုင်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ လွှတ်တော်အနေနဲ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း မိမိတို့လွှတ်တော်က ပြီးခဲ့တဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုတာက ဒီလွှတ်တော် အစည်းအဝေးမှာပဲ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အပါအ၀င် သက်သာခွင့်ရရှိဖို့ အတွက် လွှတ်တော်အနေနဲ့လည်း အဆိုပြု ဆောင်ရွက်ခဲ့တာ ရှိပါတယ်”ဟု ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်မောင်ရီက “အကျဉ်းသား ထပ်လွှတ်ပေးရေး ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာလည်း ပြောကြတယ်။ အပြင်မှာလည်း ပြောကြတယ်။ လွှတ်ပေးဖို့ ကျန်သေးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် သွားနေတဲ့နေရာမှာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေးဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပြောဆို မျက်စိဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ လူငယ်တွေ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးက လူတွေက အခု ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးမှာ တော်တော်လေးမပါကြသေးတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီထဲက လူတချို့က ထောင်ထဲမှာ ကျန်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
#19 Dr.THA 2011-11-29 13:13
ဒီ Amnesty ကိစ္စမှာ လွှတ်တော်က တာဝန်ကျေပါတယ်။ သမ္မတကြီး ပြတ်ပြတ်သားသား ဆုံးဖြတ်ဖို့ လိုတာပါ။ လွှတ်တော်မှာ တပ်က ကိုယ်စားလှယ်ပြောတဲ့ သူတို့တပ်မတော်သားတွေကိုလဲ စီစစ်လွှတ်ပေးဖို့ဆိုတာလဲ အမှန်ပါပဲ။ ကိုယ့်တပ်ကရဲဘော်တွေကငတ်လို့ ဒီတော့ ရိုးတဲ့၊ အကပ်မရှိတဲ့ တပ်ရင်းမှူးက ကြံရာမရတော့ စီပွားရေးထွက်လုပ်၊ သစ်တွေခုတ်၊ မလည်တော့မိ၊ မူးမူးနဲ့ ထောင်အနှစ် ၂၀ ချကွာလို့ အပေါ်ကပြောတော့ ထောင်ကျ။ ဒါတွေကို သမ္မတကြီးလဲ သိမှာပါ။ ဒီလိုပါပဲ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တုန်းက EMG ကို ထောက်လှမ်းရေး ၀င်စီးတုန်းက အမှုတွဲမှာပါတဲ့ နိုင်ယက္ခဆိုတဲ့ ကောင်လေးတွေ (သူတို့ကို သိလဲမသိ မြင်လဲမမြင်ဘူးပါဘူး) ဆိုရင်လည်း နယ်ကနေအလုပ် ရှိမလားလို့တက်လာ၊ အလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ MI သတင်းပေးက ဂျာနယ်ရောင်းရမယ်ဆိုပြီး တည်ကြက်အဖြစ်အသုံးချ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်လုပ်ကြံမှု ကြံရာပါဆိုပြီး ထောင်ဒဏ်တစ်သက်ချထား အခုထက်ထိ ထောင်ထဲမှာ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားထဲမှာလဲ သူတို့မပါ။ အားလုံးကို စီစစ်လွှတ်ပေးပါ။ ထောင်တွင်းတရားရုံးမှာ အကျဉ်းနည်းနဲ့ တရားစစ်ဆေးခံရတဲ့ သူအားလုံးဟာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပဲလေ။ ဆူမှာ ပူမှာ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ မန္တလေးဘုန်းကြီးဆန္ဒပြမှု၊ ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည်တွေမှာ ဘယ်မှာလူထု ပါလို့တုန်း။ ပြည်သူလူထုအများစုက ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုး မလိုလားပါဘူး။ မန္တလေး ဘုန်းကြီးကိစ္စကြောင့် တွေဝေသွားတယ်ဆိုတဲ့ ဦးနေဇင်လတ်ပြောတာ ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။ ပြည်သူအများစုက ရှေ့ကိုပဲ သွားချင်နေကြပြီ။ ဒါကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD မှတ်ပုံတင်တာ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာကို လူထုက ထောက်ခံခဲ့တာပဲပေါ့။ သမ္မတကြီးခင်ဗျာ၊ လုပ်စရာရှိတာကို ရဲရဲသာလုပ်ပါ။ စေတနာမှန်ရင် အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။
+3 #18 USaytanar 2011-11-29 10:58
Political Advantage လိုချင်လို့။
It looks like SOMALI PIRATES.
Pirates hold sailors for money.
Government hold political prisoners for political advantages.
+8 #17 casperchitoo 2011-11-28 21:51
အစောကြီးကတည်းက လူပြောင်းပါလို့ ပြောနေတာ….. လူဆိုတာသေတဲ့အထိ သောက်ကျင့်မပြောင်းဘူး…
+39 #16 Dr.THA 2011-11-28 16:02
ဆူပူတာတို့ လှုံဆော်တာတို့ဆိုတဲ့ စကားတွေကို ဒီအထိ သယ်မလာသင့်တော့ဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် Amnesty တောင်ပေးရမှာကို အခုလို အချိန်ဆွဲနေတာကို မကြိုက်ဘူး။ ဒီတစ်ခါ လွှတ်ပေးတဲ့အထဲ ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ မပါရင် တိုင်ပြည်မတည်ငြိမ်လို့ လွှတ်မပေးတာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရေးအရ Political Advantage လိုချင်လို့၊ ရှင်းရှင်းပြောရရင် တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် လုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်လိုစိတ်မရှိဘူး ဟန်ပြပဲလုပ်နေတာလို့ သတင်းမီဒီယာတွေကော၊ လူထုကပါ ယူဆလာလိမ့်မယ်။ မင်းမှာသစ္စာ၊ လူမှာကတိ၊ ကတိသစ္စာတည်သောအခါ နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးဖက်ဝင်၏တဲ့။ တိုင်းပြည်မှာ လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေ အများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာ ဒီနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပြသနာကို အဓိကပြသနာကြီးလို ရှင်းနေတာမျိုးသဘောမကျဘူး။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုတာ NLD ပါတီ မှတ်ပုံတင်တာ၊ ကလင်တန်လာတာနဲ့ ပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူး။ Be by gone & let by gone လို့ အားလုံးက သဘောထားကြမှသာ တိုင်းပြည်က ရှေ့ဆက်လို့ရမှာပါ။ တစ်ဖက်က Amnesty မပေးဘဲ မယုံသင်္ကာစိတ်နဲ့လုပ်ရင် တစ်ဖက်ကလည်း အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဟာတွေအတွက် ပြည်သူက ခွင့်လွှတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့ Amnesty ကို စိတ်ရှင်းရှင်လင်းလင်းနဲ့ ပေးလိုက်ပါလို့ သမ္မတကြီးကို တိုက်တွန်းပါတယ်။ ပြည်ပက ပြန်လာမယ့် သူတွေကိုလဲ ခွဲခြားခွဲခြား မလုပ်ဘဲ ပြန်လာခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ အခု ကိုယ်လိုတဲ့ သူတွေကိုပဲ ပြန်လာခွင့်ပေးတော့ အခွင့်အရေးသမားတွေချည်းပဲ ပြန်လက်ခံသလိုဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ အမှိုက်ရှုပ်လာတော့မယ်။ Amnesty ကို ပေးရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေတင် မဟုတ်ဘဲ တရားမျှတစွာ စီရင်ခြင်း မခံခဲ့ရတဲ့ အမှုတွေ (ဥပမာ- အကောက်ခွန်အရာရှိတွေ၊ နိုင်ငံရေးအရ ငြိုငြင်လို့ခံရတဲ့ စီးပွားရေးအမှုတွေ) အားလုံးကို စီစစ်ပြီး Amnesty ပေးသင့်ပါတယ်။ အရင် ထောက်လှမ်းရေးက မှားယွင်းဖမ်းခဲ့တာတွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဦး ရမ်းခဲ့တဲ့ အမှုတွေကိုပါ စီစစ်ပြီး Amnesty ပေးပါ။ ဒီလို စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ စေတနာပါပါလုပ်ရင် အစိုးရအနေနဲ့ ဘာကိုမှ ပူပန်စရာ မလိုပါဘူး။
+24 #15 Hla Kyaw Nay 2011-11-28 14:33
ဒါပေါ့… စဉ်းစားရမှာပေါ့… ကိုယ့်အမျိုးတွေမှ မပါတာ… တိုင်းပြည်လဲ လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့…
လူသတ်မှု. ဓားပြတိုက်. လူကုန်ကူး စတာတွေတောင် လွှတ်ပေးသေးတာပဲဗျာ… နိုင်ငံရေးကတော့ … မြန်မြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါဗျာ။ ရာဇ၀တ်သားတွေထက် ဆိုးနေလို့လား….
ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံရေးနဲ့နေတဲ့ ရေပေါ်စီလူတန်းစားအတွက် လူဆိုးသူခိုးရာဇ၀တ်သားတွေက စိုးရိမ်စရာမလိုဘူး။
ဒါပေမယ့် ထောင်ထဲကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာ တိုင်းပြည်ကောင်းကြောင်းလုံ့လပြုသူတွေမို့ သူတို့အတွက်တော့ စိုးရိမ်ရတာပေါ့။ အနှစ်နှစ်ဆယ်တရားဝင် သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာလည်း ဒီစစ်တပ်။ ဒီစစ်တပ်ဟာစစ်တပ်အလုပ်မလုပ်ပဲ နိုင်ငံအစိုးရရေးရာနေရာတကာမှာ စစ်တပ်နဲ့စစ်သားဗိုလ်ချေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက်အသုံးပြုပြီး ၀င်ရောက်ချယ်လှယ်ခဲ့တာ၊ ၀င်ရောက်ချယ်လှယ်နေတာဟာ ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့ သက်ဆိုးရှည်နေတဲ့ အကြီးမားဆုံးသော အကျင့်ပျက်လာဘ်စားမှုကြီး Conflict Of Interest ပေါ့။ ဒီလို အဖွဲ့အစည်းကြီးထဲက ထိပ်ပိုင်းလူကြီးလူကောင်းတွေရဲ့ စကားပဒါသအလှအပတွေဟာလည်း နတ်စကားတွေပေါ့။
မြင်သာထင်ရှားအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ ဒရိုင်ဘာမရှိတုန်း စပါယ်ယာ ဘတ်စကား တက်မောင်းနေသလိုပေါ့ ပရိသတ်ကြီးရဲ့။
+22 #14 mtkmay9 2011-11-28 14:11
+14 #13 USaytanar 2011-11-28 10:51
I would like to request Dr. THA to write something regarding this topic.
Dr. THA, Ludu Sein Win, Saya Aung Thin, U Thura (Zarganar) are the most suitable persons to explain the relationship between ဆူပူမှု၊ အုံကြွမှု and နိုင်ငံရေး.
+43 #12 ဖိုးအောင်လေး 2011-11-28 09:50
သိပ်မရှင်းဘူးဗျာ “ဆူပူမှု၊ အုံကြွမှု အတွက်မပါဘဲ” ဒါတွေမှာ မပါခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားရှိသလားဗျ
ရှိတာပေါ့ဗျ။ လမ်းပေါ်မထွက်ဘဲ လူမသိသူမသိ အကုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ များစွာ ထောင်အသီးသီးထဲမှာ ကျန်နေသေးတာပေါ့။ ကိုနေဘုန်းလတ်၊ ကိုစည်သူဇေယျ၊ ရွှေသံစဉ်တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင် ကိုဝင်းမော်၊ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင် အစရှိသူတွေဟာ “ဆူပူမှု၊ အုံကြွမှု အတွက်မပါဘဲ” အမြင်ကတ်ပုဒ်မနဲ့ မတရားဆွဲစိခံလိုက်ရတဲ့ ဓားစာခံတွေပေါ့။ လက်နက်ကိုင်အစိုးရက တုတ်တစ်ချောင်းတောင်ကိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကို ဘယ်လောက်တောင်ကြောက်လဲဆိုတာသက်သေပဲ … ဒါတွေဟာ သမိုင်းမှာ ကျန်ခဲ့မယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုအပေါ် သစ္စာဖောက်လီဆည်မှုကြီးတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ အမျိုးကောင်းသားယောင်္ကျားကြီးတွေ ညကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်နိုင်ကြပါစေ။ သားသမီးမျိုးဆက် မျက်နှာပွင့်လန်းကြပါစေ။
+36 #11 wuntho 2011-11-28 09:37
ကို ရွှေမန်း ခင်များ ဘာတွေ ပြောနေလဲ။။။ ကျုပ် ဘာလီ မှာ၊ နိုင်ငံ ရေး အကျဉ်း သားမရှိဘူး ပြော ထားတယ်လေ။ ကျုပ် ဘာလီ မှာ ရှိတုန်း ခင်များ နတ်ချင်း အက ပဲ ကြည့်နေတာ လား? (ပုံ/ သမတ)
+31 #10 phoehtet 2011-11-28 09:32
အင်း..စကားက ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်..လူတွေကြည့်တော့ မားမားခန့်ခန့်ကြီးတွေ ..မရိုးသားလိုက်ကြတာ..စိတ်ဆိုး..စိတ်ပျက်ရတာထက် ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် စိတ်အားငယ်တာ ပိုမိပါတယ်..ဒီလူ..ဒီလေ..ဒီစကားတွေနဲ့ကတော့ ရွှေပြည်တော်ကြီး မျှော်တိုင်းဝေးပါဗျာ..
+38 #9 zmpfeed 2011-11-28 07:51
ရွှေမန်းရာ…မင်းရဲ့ သားတွေက ရေနွေကြမ်းပုလင်းထဲ ထည့်ရောင်းမယ့် ဧရာမြေ ဆုိုပြီး ပြည်သူတွေရဲ့ငွေတွေကိုလိမ် မင်းက မင်းထမီဝတ်ပြီး.. လူကြားထဲ မိန်းမလို မိန်းမရစကားပြောနေတာ လွှတ်တော်ဥက္ကဌတဲ့ မင်းမရှက်ပေမယ်.. ပြည်နာတယ်ကွ
+56 #8 Hla Kyaw Nay 2011-11-28 07:21
ရှက်ဖို့ကောင်းလွန်းတယ်။ ဒါ ရိုးရိုးယောင်္ကျားမဟုတ်ဘူး ယောင်္ကျားဘသားလို့ခေါ်တဲ့ စစ်သားမှစစ်သားစင်စစ်။ ဒီလိုလူတွေပါးစပ်က ဒီလို ရှုပ်ထွေးတဲ့စကားတွေနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူထုကို မလှိမ့်တပတ်လုပ်တာထက် ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာမရှိတော့ဘူး။
တပ်မတော်အပေါ်ပိုင်းလူတစ်စုကောင်းစားဖို့ စစ်တပ်ကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီး ကလိန်စေ့နေတဲ့ ပါးစပ်တွေထက် ပြည့်တန်ဆာမဈေးစကားပြောတာမှ ပြတ်သားဦးမယ်။
စစ်တပ်က လူထုကို မပစ်သတ်ပါဘူး။ မတရားဖမ်းဆီးမချုပ်နှောင်ပါဘူးလို့ လူထုသစ္စာစောင့်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကသာ အာမခံလိုက်ပါ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အဓမ္မအစိုးရ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ ကမ္ဘာကိုပြချင်ပါသေးတယ်။
တစ်ခုပဲ ပြောချင်တယ် ခများတို့လိမ်ချင်သလိုလိမ်၊ညာချင်သလိုညာတာကြီးကို သိသိကြီးနဲ့ခံနေရတာ ကျုပ်တို့ပြည်သူလူထု အလို့၊တုံးလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မြဲမြဲမှတ်ထားပါ။
တုတ်တုတ်ချင်း၊ ဓားဓားချင်း အမြဲတမ်း လူရမ်းကားစကားပြောတဲ့ အစိုးရကို နောက်ပြောချင်သေးတယ်။
တကယ်တမ်းသတ္တိရှိရင် ပြည်သူလူထုနဲ့ နှုတ်နှုတ်ချင်း အရင်ပြီးအောင်ရှင်းပါ။
မနိုင်လို့ လက်နက်အားကိုးဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့ ကလေက၀အလေအလွင့်စိတ်ဓာတ်၊ အောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမသုံးစမ်းပါနဲ့။
+104 #7 sis min aung 2011-11-27 18:52
အခုထိကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မပြောနိုင်သေးဘူး…
ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာ … အပြောရှင်းရမယ်လေ…
ဆင်ဝှေ့ ရန်ရှောင်တွေလုပ်မနေပါနဲ့ …
နိုင်ငံကို တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်… ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်က အရင်က အမှားတွေကို ပြုပြင်သင့်ပြီး… ဒါမှလည်း ပြည်သူတွေ ယုံကြည်မှုကိုရမှာပါ…
+63 #6 minminoo 2011-11-27 17:48
ဝှေ့ လယ်ကြောင်ပတ် လုပ်နေတယ် ဟား ဟား ဟား
+72 #5 kotin 2011-11-27 17:05
တိုင်းပြည် အေးချမ်းသာယာပြီး အမြန်ဆုံး ဖွံဖြိုး တိုးတက် ချင် တယ် ဆိုရင် အားလုံးအတူတကွ လုပ်မှ ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားကြမှ ဖြစ်မှာပါ…. အဲ့ဒီလို တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်ဖို့ အတွက် အကျဉ်း ထောင်တွေထဲမှာ ကျန်နေသေးတဲ့သူတွေ ( သူခိုး၊ဓားမြ၊ ခါးပိုက်နှိက်၊မုဒိန်းသမားတွေမဟုတ်) တွေကို လွတ်မှဖြစ်ပါမယ် …
လုပ်ကြပါဗျာ …. ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကြီး ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း ရှိတာကို မြင်ချင်လှပါပြီ…… အားလုံး အတူ တကွ ၀ိုင်းဝန်း ကြိုးစားကြပါဆို့ လား…..
+81 #4 east1407 2011-11-27 16:51
အာဆီယံ ဥက္ကဌ ရာထူးမရခင်ကတော့ ခုပဲလွှတ်တော့မလိုလိုနဲ. ရလဲရသွားရော တမျိုးပြောင်းသွားရော။လူကြီးလူကောင်း မပီသတဲ့ လုပ်ရပ်ပဲ။ဒါကြောင့်လည်း မရှက်မကြောက် ထမီပြောင်းဝတ်ရဲတာပဲ။
+58 #3 aero 2011-11-27 16:43
NLD ကမှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲပြန်ဝင်မယ်လည်းလုပ်ရော အရူးကွက်နင်းနေပြီ။ အင်းလုပ်ကြပါ လုပ်ကြပါ။ ဒီလာမယ့် တစ်ပါတ်နှစ်ပါတ်အထိ အခွင့်အရေးကိုမဖမ်းဆုပ်ပဲ လွှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့။ ဟင်းးး မတွေးချင်တော့ဘူး။
+91 #2 Min Ye Kyaw Swar 2011-11-27 16:16
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို အများလက်ခံနိုင်အောင်မလုပ်ဘဲ စွတ်ငြင်းနေလို့မှမဆုံးသေးဘူး၊ လာပြန်ပြီ ‘ ဆူပူမှု၊ အုံကြွမှုအတွက် မပါဘဲ နိုင်ငံရေး ‘ တဲ့။ ဒါကိုရော ဘယ်လိုအငြင်းပွားစရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဦးမှာလဲ ? ရှင်းနေတာကိုရှုပ်အောင်လုပ်ပြီး အချိန်ဆွဲ၊ ဖြုန်းနေတဲ့အလုပ်တွေ တော်ပါတော့ဗျာ။
+90 #1 lordvladimer 2011-11-27 15:59
သိပ်မရှင်းဘူးဗျာ “ဆူပူမှု၊ အုံကြွမှု အတွက်မပါဘဲ” ဒါတွေမှာ မပါခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားရှိသလားဗျ…. လွှတ်လိုက်ပါဗျာ ပူးပေါင်းလိုက်ပါ နိုင်ငံအတွက် အကျိုးရှိမှာပါ…. နိုင်ငံအကျိုးရှိရင် နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ လူတိုင်း ခံစားရမယ့် ကိစ္စပါ… လွှတ်လိုက်ပါ